Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » Miato ny diany any UK sy Irlandy i Etazonia
Etazonia dia hampiato ny sidina an-habakabaka rehetra avy any Angletera sy Irlandy ankoatry ny vavahady eoropeanina 13 hafa izay misy izao ny firenena Schengen ao amin'ny EU sy Suisse ary firenena eropeana maro hafa. koa. Ny filoha dia mampiditra ireo vahiny rehetra izay tany Eropa tao anatin'ny 2 herinandro lasa.
Hatao amin'ny alatsinainy izao izany. Ny olom-pirenena amerikana, ny mponina maharitra ary ny diplomaty dia mbola avela hiverina any Etazonia ary hotakina mandritra ny 2 herinandro aorian'ny fahatongavany.
Mandritra izany fotoana izany dia nilaza ny filoha fa hanohana ny orinasam-piaramanidina, fitsangantsanganana ary hôtely ny governemanta.
Ny filoha amerikana Trump dia nanambara io lalàna vaovao io tamin'ny fehezan-dalàna 212 (f) asabotsy.
Fizarana 212 (f) ny lalàna momba ny fifindra-monina sy ny zom-pirenena (INA) dia manome ny filoham-pirenena amerikana fahefana malalaka hanatanteraka fameperana ny fifindra-monina amin'ny alàlan'ny fanambarana. Ny lalàna dia mamela ny Filoham-pirenena hampiato ny fidiran'ny vahiny na ny sokajin'olon-kafa na ny fameperana amin'ny fidirana kilasin'ny vahiny vonjimaika raha toa ka tapa-kevitra izy fa hanimba ny tombontsoan'ny Etazonia ny fidiran'ny vahiny toy izany.
Mba hamerana ny fidiran'ny vahiny na ny sokajin'olon-kafa eo ambanin'ny fizarana 212 (f), ny Filoham-pirenena dia tsy maintsy mahita fa ny fidiran'ireo vahiny na kilasy vahiny ao Etazonia ireo dia "hanimba ny tombontsoan'ny Etazonia. . " Raha manao fikarohana toy izany ny Filoham-pirenena dia mety hamoaka fanambarana mandrara na mampiato ny fidiran'ny vahiny amin'ny kilasy toy izany izy.
Fizarana 212 (f) manome ny filoha fahefana hampiato na hametra ny fidiran'ny vahiny na sokajin-tany hafa "mandritra ny fotoana heveriny fa ilaina." Noho izany, ny fizarana 212 (f) dia tsy mametraka fetra amin'ny faharetan'ny fampiatoana na fameperana.
Ny fizarana 212 (f) dia manome safidy roa an'ny filoham-pirenena momba ny fidiran'ny kilasin'ny vahiny iray izay tapa-kevitra ny hanimba ny tombontsoan'ny Etazonia. Voalohany, ny filoha dia afaka mampiato ny fidiran'ny vahiny toy izany "toy ny mpifindra monina na tsy mpifindra monina." Raha tsy izany, fa tsy mampiato ny fidiran'ny vahiny toy izany, ny Filoham-pirenena dia mety hametraka fameperana amin'ny fidiran'ny hafa firenena araka ny hitany fa mety.
Tantara mipoitra ity ary hovitaina.
Mampitsahatra ny asa aman-draharaha eran-tany ny Royal Caribbean Cruises